25 Minamato Yekunamatira Yekuporesa Maitiro ese Ekurwara Nezvirwere | MINYENGETERO MARI
Muvhuro, Nyamavhuvhu 2, 2021
musha Pfungwa dzemunamato 25 Minamato Yekunamatira Yekuporesa Zvese Manzwiro ehurwere uye Zvirwere
25 Minamato Yekunamatira Yekuporesa Zvese Manzwiro ehurwere uye Zvirwere
Mabasa 10: 38:
38 kuti Mwari akazodza sei Jesu weNazareta neMweya Mutsvene uye nesimba: akafamba zvakanaka, achiporesa vese vakadzvanywa nadhiabhori; nekuti Mwari waiva naye.
Nhasi tiri kutarisa makumi maviri nemashanu Pfungwa dzeMunamato Yekuporesa Zvese Zvirwere Zvevarwere Uye Zvirwere. Isu tinoshumira Mwari anoporesa, Iye anonzi Jehovha rapha, zvisinei zvako kurwara achakuporesa kana uchishevedzera kwaari. Kurwara nezvirwere kudzvinyirira dhiabhori, hakuzi kuda kwaMwari kuti chero mwana Wake arware. Hakuna baba vakanaka vacharanga vana vavo nehurwere nezvirwere, Mwari wedu kudenga kuna Mwari akanaka, haambotitambudza kana kutikuvadza hosha nezvirwere. Naizvozvo, usafunge kuti Mwari arikukurova nehurwere nekuda kwezvivi zvako, kana kuti Mwari ari kukutambudza nehurwere nekuda kwehupenyu hwakaipa hwawakatungamira kare, kwete, Mwari ndiMwari ane tsitsi, uye kana achikanganwira. anokanganwa, izvo zvauri kutambudzika nazvo imhedzisiro yesarudzo dzako dzisina kunaka, uye ngoni dzaMwari dzinogona kukuporesa pane zvese zvakakanganisika sarudzo dzako dzakaipa.
Uri kurwara mumuviri wako here nhasi, Mwari vachakuporesa, hazvina basa kuti warwara sei, kana kuti zita rechirwere nderei, Mwari vachakuporesa uye vanunure kubva kumatambudziko ese. Ita izvi Pfungwa dzeMunamato Kuporesa Zvese Zvirwere Zvevarwere Nezvirwere nekutenda nhasi uye kutarisira kuti kurapwa kwako kuchauya pakarepo. Ndiri kuona Mwari vachizadzisa zvese zvine chekuita nehutano hwako muzita raJesu.
1. Baba, ndinokutendai nekuda kwesimba renyu rine simba rinokwanisa kuporesa kurwara kose.
2. Baba ndinokutendai nekuti ndimi Ishe Mwari vanondiporesa.
3. Rega ropa raJesu riwedzerwe mumidziyo yangu yeropa, muzita raJesu.
4. Ndinoraira wese mumiririri wechirwere muropa rangu uye nhengo dzemunhu kuti dzinyangarika, muzita raJesu.
5. Ropa rangu ngarirambe mhando dzose dzezvirwere nezvirwere, muzita raJesu.
6.Mweya Mutsvene, taura kusunungurwa uye kupora muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
7. Rega ropa raJesu rireve kuporesa kweutenda hwese muhupenyu hwangu.
8. Ini ndinobata ropa raJesu pamusoro pako mweya we (taura zviri kukunetsa). Kuraswa kubva mumuviri wangu izvozvi !!! Muzita raJesu
9. O Ishe, ruoko rwenyu rwekupodza rwakatambanudzwa pane hupenyu hwangu ikozvino muzita raJesu.
10. O Ishe, ruoko rwenyu rwechishamiso rwakatambanudzwa pane hupenyu hwangu ikozvino muzita raJesu.
11. O Ishe, ruoko rwenyu rwekununura rwakatambanudzwa paupenyu hwangu ikozvino.
12. Ini ndinodzima kusangana kwese nemweya werufu, muzita raJesu.
13. Ini ndinotsiura utiziro hwese hwekurwara, muzita raJesu.
14. Ini ndinoparadza kubatwa nekushanda kwehurwere pahupenyu hwangu, muzita raJesu.
15. ibvi rose rekushaiwa simba muhupenyu hwangu, uta, muzita raJesu.
16. O Ishe, rega kushaya simba mumuviri wangu kushanduke kuve simba muzita raJesu
17. Ini ndinoraira rufu pamusoro pehurwere chero hupi zvahwo munzvimbo yangu yehupenyu, muzita raJesu.
18. Handichaonazve chirwere ichi muzita raJesu.
19. Baba ishe, revai chamupupuri chaMwari chiparadzire chero mudziyo wehurombo wakagadzirirwa kupokana nehupenyu hwangu, muzita raJesu.
20. Wese mweya unodzivisa kupora kwangu zvakakwana, wira pasi ufe izvozvi, muzita raJesu.
21. Baba ishe, regai vese vanoita zvekufa vatange kuzviuraya, muzita raJesu.
22. Baba ishe, rega hutachiona hwese hwehutachiona mumuviri wangu vife, muzita raJesu.
23. Baba ishe, rega munhu wese wechirwere anoshanda achirwisa hutano hwangu anyangarika, muzita raJesu.
24. Tsime rekusagadzikana muhupenyu hwangu, woma izvozvi, nemuzita raJesu.
25. Nhengo yega yega yakafa mumuviri wangu, gamuchira hupenyu izvozvi, muzita raJesu.
Previous nyayaMazuva manomwe Anotsanya Uye Munamato Wekubudirira Mune Mhedzisiro YeMibvunzo
inotevera20 Isimba Hapasina Kunonoka Kunonoka Mitezo yeMinyuko
Christopher Ramlal Zvita 21, 2020 At 11:24 pm
Ndinokutendai mufundisi nekundidzidzisa kunamata, ndinonamata kuti Ishe vakuropafadzei nemhuri yenyu muzita raJesu amen, ndokumbira munamatire musana wangu uye hutano nehuro muzita raJesu, maita basa zvikuru.
20 Kununura Minamato Kubva Ancestral Powers
20 Hondo yemweya minamato inopesana nemweya wekunonoka nekushushikana
Kunamata Points Kurwisa Hondo YeBarika Barika
Minamato makumi matatu emaropafadzo emimba